सुगर देखि नआत्तिनुहोस् ‘यसरी खाना खान जान्नुभयो भने नियन्त्रण हुन्छ’ डा‍. ज्योती भन्छिन् ! – Sandesh munch
मंगलबार ०६ माघ २०७७
सुगर देखि नआत्तिनुहोस् ‘यसरी खाना खान जान्नुभयो भने नियन्त्रण हुन्छ’ डा‍. ज्योती भन्छिन् !
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पौष २४, २०७७ समय: १७:५७:११
काठमाडौ । डा‍. ज्योती भट्टराई मधुमेह रोगको सन्र्दभमा निक्कै चर्चित नाम हो । उहाँले थुप्रै मधुमेह रोगीलाई उपचार सेवा दिइसक्नुभएको छ । उहाँले यो रोग नियन्त्रणका विभिन्न उपायको खोजी गरिरहेको हुनुहुन्छ ।
अचेल उहाँको मेट्रो काठमाडौं अस्पतालमा मधुमेह भएर गएपछि हरेकले ‘डाइट क्लास’ लिनैपर्छ। यो कक्षामा डाइटिसियनले मधुमेह भएपछि के खाने, के नखाने, मात्रा मिलाएर कसरी खाने आदिबारे जानकारी दिन्छन्।‘हामीकहाँ मधुमेह भएपछि यो पनि खान हुन्न, त्यो पनि खान हुन्न भनेर शरीर कमजोर बनाएर आउने धेरै छन्’, डा. भट्टराई भन्नुहुन्छ, ‘त्यसैले यस्ता बिरामीका लागि काउन्सिलिङ जरुरी छ भनेर नियमित कक्षा लिन लगाउँछु।’
यसबाहेक ‘एक्सराइज’ गर्न पनि सिकाइन्छ। मधुमेहका बिरामी औषधि खान झण्झट मान्नुहुन्छ । यो कुराले उहाँहरूलाई सधैँ तनाव दिन्छ। ‘औषधि मात्र खाएर पुग्दैन भन्ने मलाई लाग्छ’, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘औषधिसँगै खानपानमा ध्यान दिइएन भने मधुमेह मात्र होइन कुनै पनि रोग निको हुन सक्दैन।’अर्को कुरा बिरामीलाई मानसिक तनाव पनि भइरहेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा मनोपरामर्शको पनि आवश्यकता पर्नसक्छ। सबै कुरा मिलाएर उपचार दिन सके मात्र बिरामीलाई लाभ हुने डा. ज्योतीको बुझाइ छ।पछिल्लो समय उहाँले बिरामीलाई उपचारात्मक खानामार्फत मधुमेह नियन्त्रण गर्न सुरु गर्नुभएको छ ।
डा. ज्योतिका अनुसार यसको परिणाम असाध्यै राम्रो आएको छ। ‘हुन त यो हामीले शुरु गरेको एक महिना पनि भएको छैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘तर एक सातामै यसको परिणाम देखिन थालेको छ।’उहाँका अनुसार यो उपचारात्मक खाना उपचार विधि मोटोपन बढी भएका व्यक्तिहरूका लागि ल्याइएको हो। ‘जो व्यक्ति मोटा छन्, उहाँहरूलाई सुगर नियन्त्रण गर्न निकै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले हामीले यस्ता व्यक्तिलाई दैनिक ८०० मात्र क्यालोरी भएको खानाको चार्ट दिन्छौँ’, डा. ज्योती भन्नुहुन्छ, ‘यसमा भात, रोटी, तरकारी र फलफूल सबै पर्छन्। तर क्यालोरी लिमिट भने क्रस गर्न पाइँदैन।’,,
यो विधि प्रत्यक्ष रूपमा डाक्टर र पोषणविदको निगरानीमा हुन्छ। उहाँले मोटा बिरामीलाई छानेर कतिपयलाई त औषधि छुटाएर र कतिपयलाई औषधिको मात्रा कम गराएर उपचार शुरु गर्नुभएको छ । यसो गर्दा एक सातामै दुई किलोसम्म तौल घटेको उहाँले देख्नुभयो । सुगर पनि नियन्त्रणमा आएको पाइएको छ। हाम्रो उदेस्य सुगर नियन्त्रणमा ल्याएर औषधी खान नपर्ने बनाउने नै हो ।‘हामीले खाएको खानाका कारण शरीमा बोसो बनेर जमेको हुन्छ। पहिला भए परिश्रम गरेर पग्लिन्थ्यो’, डा. ज्योती भन्नुहुन्छ, ‘तर अहिले धेरैले शारीरिक परिश्रम गर्दैनन्। त्यसकारण शरीरमा बोसो थुप्रिँदै जान्छ पेटको गोलाइ बढ्छ र अनेक समस्या निम्तिन्छ।’
– कैल्शियम, मैग्नीशियम र पोटैशियम आदि प्रचुर मात्रामा खानुस् । यो तत्व दूध, हरियो साग, सब्जीहरू, दाल, सुन्तला, स्ट्राबेरी, बदाम, केरा र सीताफल आदिमा खूब पाईन्छ ।– सूप, सलाद, अमिलो फलफूल, कागती पानी, नरिवल पानी, चना, भटमास आदि खानु फाईदाजनक छ ।
– गाजर, बन्दागोभी, ब्रोकाउली, पालुङ्गो, कटहर, टमाटर, लहसुन, प्याज, हरियो सागपात र मौसमी फल खूब खानुस् ।– पानी खूब पिउनुस् । दिन भरमा करीब १० गिलास पानी पिउनुस् ।– ओमेगा थ्री वाला चिज, जस्तो कि ओखर, बदाम, माछाको तेल, आदि खानुस् । दैनिक पाँच/सात दाना बदाम र ३/४ वटा ओखर अवश्य खानुस् ।
– सस, अचार, चटनी, अजीनोमोटो, बेकिंग पाउडर आदिबाट टाढै रहनुस् । पापड पनि बिना नुन वाला खानुस् ।– पैक्ड या फ्रोजन आइटम नखानुस् । यसमा प्रिजरभेटिभ हुनुको साथै नुन पनि ज्यादा हुन्छ । यसैगरी बेकरी आइटम्समा सैचुरेटिड फैट ज्यादा हुन्छ । चिप्स, बिस्कुट, भुजिया, कुकीज, फर्कोजन मटर, केक, पेस्ट्री आदिबाट बच्नुस् ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
– खानामा माथिबाट नुन नछर्किनुस् । सलाद, आदिमा पनि नुन नहाल्नुस् ।– नियमित रुपबाट नान भेज खाएर हेभी नान भेज (रेड मीट आदि) खानबाट बीपीको आशंका बढ्छ ।
– टेन्शन या स्ट्रेस कमभन्दा कममा रहनुस् ।– दैनिक स्नान गर्नुस् ।– प्रतिदिन व्यायाम गर्नुस् ।– खूब पानी पिउनुस् ।– रसदार फल जस्तै – सुन्तला, स्याउ, आप, केरा इत्यादि रोज खानुस् ।– सफा, शुद्ध र पौष्टिक आहार खानुस् । जंक फूड जस्तै कि बर्गर, पिजा आदि कम खानुस् ।
बट्टाईको अन्डा शक्तिवर्धक औषधी १२ फाइदा
८.	आफ्नो फोक्सो ७२ घण्टामा आफैं यसरी सफा गर्नुहोस्, पढौं र जानकारीको लागी सेयर गरौं…
९.	सुत्ने बेला किन ब्रा खोलेर सुत्ने? नखोल्दा के हुन्छ ? हरेक महिलाले जान्नै पर्ने !